Nhau dzeBhaibheri: Mafashamo Kusvikira Kununurwo muEgipita - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Vanhu vasere bedzi vakapukunyuka Mafashamo, asi munguva yakati kuti vakawedzera chiverengero kuva zvuuru zvizhinji. Ipapo, makore 352 pashure peMafashamo, Abrahama akaberekwa. Tinodzidza kuti Mwari akapfuurira sei kuchengeta chipikirwa chake nokupa Abrahama mwanakomana ainzi Isaka. Tevere, nezvavanakomana vairi vaIsaka, Jakobho akasarudzwa naMwari.
Jakobho akanga ane mhuri huru yavanakomana 12 navanasikana vakati kuti. Vanakomana vaJakobho 10 vaivenga munin’ina wavo Josefa nokudaro vakamutengesera muutapwa muEgipita. Gare gare, Josefa akava mubati ushe anokosha weEgipita. Pakasvika nzara huru, Josefa akaedza vakoma vake kuti agoona kana vakanga vachinja mwoyo. Pakupedzisira, mhuri yose yaJakobho, vaIsraeri, yakatamira Egipita. Ikoku kwakaitika makore 290 pashure pokuberekwa kwaAbrahama.
Kwamakore 215 akatevera vaIsraeri vakagara muEgipita. Pashure pokufa kwaJosefa, vakava varanda imomo. Munguva yakati kuti, Mosesi akaberekwa, uye Mwari akamushandisa kununura vaIsraeri muEgipita. Ose, makore 857 enhau anofukidzwa muChikamu CHECHIPIRI.